युद्ध संस्मरण : जाजरकोटको एक महिने यात्रा - साहित्य सङ्ग्रहालयसाहित्य सङ्ग्रहालय
← गीत : मुटु जली रहे छ
गीत : तिम्रै यादमा →
युद्ध संस्मरण : जाजरकोटको एक महिने यात्रा
कती पटक पढियो : 3
२०६२ साउनमा माओवादी छापामारले कालिकोट सेनाको पिली ब्यारेक आक्रमण गरी ध्वस्त बनायो । एक दर्जनभन्दा बढी छापामार र सेनाका ६२ जनाले ज्यान गुमाए । कैयौँ अत्याधुनिक हतियारसहित ६० जनालाई छापामारले नियन्त्रणमा लिएको समाचार पत्रपत्रिकाहरुमा हटकेक बनिरहेको थियो । युद्ध रापतापमा भएकाले वारपारको लडाइँमा सेना र माओवादी गर्माइरहेका थिए ।
नियन्त्रणमा लिइएका सेनालाई सुर्खेतकै पूर्वतिर ल्याइएको छ भन्ने खबर हिमाल खबर साप्ताहिकका रिपोटर प्रकाश पन्तले चालपाउनु भएको रहेछ ।
६० जनालाई लडाकुहरुले सेनालाई कस्तो व्यवहार गरिएको छ भन्ने समाचार सम्प्रेषण गर्न प्रकाश दाइ र म एक हप्ताका जो निधो भयो ।
सुर्खेत वीरेन्द्रनगर धुलियाबिट हुँदै पैदलै हाम्रो यात्रा सुरु भयो । साटाखानी चौरासे हुँदै हामी नेटा भन्ने ठाउँमा स्थानीय माओवादी कार्यकर्ताको सम्पर्कमा पुग्यौँ । नियन्त्रणमा लिइएका सेनालाई कहाँ राखिएको छ भनस् सोधखोज गर्दा ती कार्यकर्ताले अनविज्ञता जनाए र त्यसका लागि एरिया इन्चार्जसमक्ष हाम्रो कुरा राखिदिने बताए । दोस्रो दिन बिहान हामी त्यहाँबाट हिँड्नुपर्ने खबर आयो ।
विभिन्न उल्झनहरु झेल्दै एक साता हिँडेर सुर्खेत काँडापोखरी पुग्यौँ । काँडा पोखरीदेखि अलि अगाडि गए जाजरकोट सुर्खेतको सीमाना पुगिन्छ । त्यहाँ पत्रकार गणेश कञ्चन भारतीसँग भेट भयो । नियन्त्रणमा लिइएका ६० जनालाई जाजरकोटमा राखिएको गणेश कञ्चन दाइले सङ्केत गर्नुभयो । उहाँ पनि उनीहरुलाई भेट्न जादै हुनुहुँदो रहेछ । हिँड्दा हिँड्दै लखतरान परेको मलाइ यात्रा जाजरकोटसम्म पुग्ने कुराले सारै बोर लागेको थियो । फर्किउँ भन्ने ढिपी गरे पनि दाजुहरुको मिसनको अगाडि म फिक्का जस्तै भएँ । उहाहरुले सम्झाइ बुझाइ गरेर जाऊँ भनेपछि मन नलागी नलागी मैले जाने कुरामा सहमति जनाएँ ।
पोखरीकाँडाबाट केही अगाडि हामी सुर्खेतलाई बाई बाई गर्यौँ र जाजरकोटतिर पाइला चाल्यौँ । त्यसपछि सुरु भयो हाम्रो चुनौती र बर्जपातहरुको यात्रा… मुख्य वर्षाद सकिए पनि मौसमले बेलाबेला वर्षिएर हामीलाई हाम्रो यात्रामा चुनौती थपिरहेको भान हुन्थ्यो ।
हाम्रो यात्रा माओवादी आधार इलाका जाजरकोट जुँगाथापाचौर पुग्यो । जुँगाथापा चौरमा मनऋषि धिताल,ओम शर्माहरुसँग भेट भयो । जुँगाथापा चौरबाट हामी माओवादी नेता तथा मध्यपश्चिम कमान्ड इन्चार्ज खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डसँगै अगाडि जाने खबर आयो । बिहान हिँड्ने बेला एक भवनमा झुस्स दारी पालेका दुब्ला दुब्ला व्यक्ति फोनमा कुरा गर्दै थिए । गणेश कञ्चन भारतीले भन्नुभयो ‘उनै हुन् माओवादी लडाकु कमान्डर जनार्दन शर्मा प्रभाकर… उनलाई नजिकबाट देख्यौँ हामीले तर उनीसँग कुरा भने हुन पाएन । झट्ट हेर्दा भने निक्कै फुर्तिला देखिन्थे । आज पनि माओवादी सरकारका प्रभावशाली ऊर्जामन्त्रीको जनपक्षीय कामले मेरो त्यतिबेला आकलन सही निस्केको जस्तो लाग्छ ।
खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डसँगै उनको सुरक्षाका लागि दुई जना छापामार हतियारसहित सँगै हामी त्यहाँबाट हिँड्यौ । यात्रामा झन चुनौती थपियो पहाडको यात्रा लेक लाग्ने चिसो सिरेटो अनि बाटोमा जुकाहरु टासिने । ढुंगाहरुमा जुका ठाडो भएर तन्किरहेको देखिन्थे ।
एक हप्ताका लागि भनेर ल्याएको पैसा लगभग सकिइसकेको थियो । प्रकाण्ड खबर बुझ्दै अगाडि बढिरहेका हुन्थे । सेनाले जाजरकोटमा आफ्नो मिसन सुचारु गरिरहेको छ भन्ने खबर गर्थे बाटोमा । गर्खाकोट जङ्गलमा केही अगाडि हिँडेका छापामार हतियारको पोजिसन लिँदै केही पर दौडिए । सेनाले हामीलाई भेट्नेभयो भनेर हामी आत्तियौँ । म झन् आत्तिएर खोलातिर दौडन खोजेँ तर प्रकाण्डले रोके । नआत्तिनुस केही हुँदैन भनेर हामी सबैलाई रोके ।
के भएछ भने सेन्ट्री बसेका माओवादी कार्यकर्ता हामीलाई सेना नै सोचेर भागेका रहेछन् । हामी पनि उनी सेना हुन् भनेर आत्तिएका थियौँ । उनले भाग्दा छाडेका डायरीहरु फेला परेपछि प्रकाण्डले भने उनी हाम्रै मान्छे रहेछन । हामी भ्रममा परेर आत्तियौं ।
हामी ढिमे पुग्यौँ, त्यहाँ स्थानीय बासिन्दाको घरमा पत्रकार भनेपछि सहज रुपमा बस्न खान सजिलो भयो । कार्कीगाउँबाट सेना आइरहेको छ भन्ने बेलाबेलामा खबर आउँथ्यो । एकजना रक्की गर्ने सेन्ट्रिवालाले सेना ढिमे नै पुगेको खबर ल्याए । त्यहाँ स्थानीय कार्यकर्ताको पनि भागाभाग भएपछि हामी आत्तियौँ । पत्रकार भनेर सेनाले हामीलाई पक्कै छाड्नेवाला छैन भन्ने लाग्यो । छापामार माथि जङ्गलमा अड्डा जमाएर बसेको छन् भन्ने खबर पाएपछि बरु छापामारकै सम्पर्कमा पुगे सुरक्षित भइन्छ भन्ने लागेर हामी सिमसिमे पानीमा भिज्दै ढिमेबाट उकालो लाग्यौँ ।
करिब एक घण्टा उकालो हस्याङ्फस्याङ गर्दै हिँडेपछि छापामारलाई भेट्यौँ । सेनाकै लवजमा बसेको देखेर मलाई त सेनाकै फेला परियो भन्ने लागेको थियो । हतियारसहित पलास्टिक ओढेर सेन्ट्री बसेका छापामारहरुले हामीलाई देखेर ठुलै स्वरमा को होस् ? भन्ने आवाज दिए । हामी पत्रकार भनेर आफ्नो परिचय दियौँ ।
जङ्गलमै मेस थियो । छापामारहरु पलास्टिकमा दाल, भात हालेर खान्थेँ । कोही यात्रामा खाने भनेर पलास्टिकमा हालेर राख्थेँ । छापामारसँगको यात्रा कम्ती रोमाञ्चक थियो हाम्रो लागि । पिठ्युँमा गरुङ्गो झोला साथमा हतियार कुम्लो कुटुरा बोकेर अविचलित हिँडिरहन्थे ती योद्धाहरु । त्यही लस्कर हिँड्दा हिँड्दै बाटो बनेको हुन्थ्यो जङ्गलमा… उनीहरु साँच्चै प्रचण्ड, बाबुरामको तस्बिरका दस्ताबेज बोकेर निःस्वार्थ जनताका लागि लडिरहेका थिए । आजकल ती योद्दाहरु कहाँ छन् होला ? जसले जनताको जीवन परिवर्तनको सपना बोकेर महिनाको ६०० रुपियाँले कैयौँ ब्याटलहरु भोकभोकै लडे । सयौँ बमका छर्रा देखाउँदै भन्थे जनताको शासन गर्ने सत्ताका लागि एक मुठी रगत रहुन्जेल लडिरहन्छौ ।
छापामारको बलिदानमा टेकेर सत्तामा पुग्ने सुप्रिमो प्रचण्ड अचेल भन्छन् युद्धमा सुरक्षा दिने कार्यकर्ताहरु आजकल चौतर्फी हमला गर्छन् । युद्धमा सुरक्षा कार्यकर्ताले होइन, तिनै निःस्वार्थी लडाकुहरुले दिएका थिए । प्रचण्डलाई देवत्वकरण गर्दै ती नेतृत्वलाई सोझिने सङ्गीनहरु लडाकुहरुको छातीले छेक्थे । हिजोका सुप्रिमोको सुरक्षा तिनै लडाकुहरुले गरेका थिए । समुन्नत नेपालको सपना देखेर लड्नेहरु आज लालाबालाहरुको भविष्य बनाउन अरबको खाडीमा तातो हावा खाइरहेका छन् । लडाकु समायोजन होइन लडाकु विघटन गरेर प्रचण्डले इतिहासमा गम्भीर भुल गरे ।
छापामारसँगको उल्झनको यात्रा हाम्रो जाजरकोट रामीडाँडा पुग्यो । रामीडाँडामा नेता देव गुरुङसँग एउटा सानो घरमा भेट भयो । प्रकाश दाजु र गणेश कञ्चनले देव गुरुङको अन्तर्वार्ता टिपोट गर्नुभयो । सुस्त र सालिन बोल्ने देव गुरुङले भोलि नियन्त्रणमा लिइएका ६० जनालाई अनमिनको निगरानीमा रिहा गरिने जानकारी गराए । त्यही जनअदालतका कानुनी अधिवक्ता एकराज भण्डारीसँग भेट भयो । अन्तर्वार्ता लिने भनेपछि उनी अस्कोट मिलाएर चिटिक्क परेर अन्तर्वार्ता लागि फोटा खिचाउन तयार भए ।
नियन्त्रणमा लिइएका ६० जनालाई छापामारहरुले त्यहाँ पुर्याए । उता रुकुम हुँदै अनमिनको टोली पनि रामिडाँडा पुग्यो । बन्दीहरुसँग सबै अवस्थाका बारेमा प्रकाश दाजु र गणेश कञ्चन दाजुले बुझ्नुभयो । नियन्त्रणमा लिइसकेपछि कुनै पनि अमानवीय व्यवहार नगरिएको र छापामारहरु साथीजस्तै लागेको उनीहरुले बताउँथे । कोही चप्पलसँगै थिए कोही सेनाको आधा युनिफममा थिए । कोही घाइते भए पनि हात खुट्टामा ब्यान्डेज बानिरहेका देखिन्थे । छापामारहरुले उपचारको व्यवस्था पनि गरेको देखियो ।
रिहाइ कार्यक्रमको आयोजना भयो । देव गुरुङले कार्यक्रममा सम्बोधन गर्छन् भन्ने लागेको थियो । तर उनी कतै देखिएनन् । खड्गबहादुर विश्वकर्मा बोले उनले ससम्मान रिहाइ गरिएको उद्घोष गर्दै प्रत्येक बन्दीहरुलाई ५÷५ सयका दरले बाटोखर्च उपलब्ध गराए । अनमिनको जिम्मा लगाएर नियन्त्रित सेनाका बन्दीहरुलाई अविर माला लगाएर बिदाइ गरियो । फेरि जिन्दगी पाएको सहानुभूतिले होला लामो लस्करमा कति त रुँदै हात हल्लाउँदै बिदा भइरहेका देखिन्थे ।
उनीहरुसँग भेट गर्ने हाम्रो मुख्य उद्देश्य पूरा भइसकेको थियो । माओवादी नेताले केही खर्च दिने प्रस्ताव गरे पनि प्रकाशले लिन मान्नुभएन । प्रकाशले आफ्नो घर हुँदै सुर्खेत फर्कने कुरा गर्नुभयो । यात्राभरिको सहचारी प्यारो गणेश कञ्चनसँग त्यहीँ बिदा भएर हामी रामीडाँडा झोलुङ्गे पुल तरेर तीरैतीर लहँतिर लाग्यौँ । जाजरकोट सदरमुकाम हुँदै प्रकाश पन्तको घरमा पुग्यौँ ।
जाजरकोटलाई मानसपटलमा ताजा र स्मरणीय बनाउँदै रुकुमको सिमाना हुँदै कतै बास बस्दै कैयौँ घण्टा हिँडेर हामी सल्लीबजार पुग्यौँ । सल्ली बजारले सल्यानको पनी मुहार देखायो । सल्लीबजारबाट सीधै वीरेन्द्रनगरको बसको टिकट काटेर हामी ठेलमठेल सिटमा बस्यौँ । गाडीले विस्तारै आफ्नो गति लियो । बसमा यही गीत बजिरहेको थियो ।
‘जिन्दगी एक सफर हे सुहाना
यहा कल क्या हो किसने जाना’
यसरी करिब एक महिनाको पैदल यात्रा पूरा गरेर हामी निलो भेरी नदीको किनारै किनार वीरेन्द्रनगरतर्फ हुइँकियौँ ।
(स्रोत : जनमञ्च डट कम)
This entry was posted in संस्मरण and tagged Mausamji Bhandari. Bookmark the permalink.
नेपाली काव्य (7,623)
नेपाली गद्य (3,929)
नेपाली कथा (2,628)
बाल कविता : विद्यार्थी
भण्डार कोठा Select Month January 2018 (120) December 2017 (338) November 2017 (314) October 2017 (320) September 2017 (329) August 2017 (349) July 2017 (447) June 2017 (357) May 2017 (381) April 2017 (254) March 2017 (304) February 2017 (261) January 2017 (499) December 2016 (535) November 2016 (381) October 2016 (351) September 2016 (354) August 2016 (269) July 2016 (245) June 2016 (154) May 2016 (166) April 2016 (238) March 2016 (551) February 2016 (539) January 2016 (574) December 2015 (697) November 2015 (464) October 2015 (245) September 2015 (220) August 2015 (215) July 2015 (320) June 2015 (125) May 2015 (118) April 2015 (181) March 2015 (224) February 2015 (122) January 2015 (113) December 2014 (138) November 2014 (109) October 2014 (107) September 2014 (114) August 2014 (216) July 2014 (125) June 2014 (119) May 2014 (152) April 2014 (213) March 2014 (96) February 2014 (202) January 2014 (147) December 2013 (123) November 2013 (118) October 2013 (112) September 2013 (283) August 2013 (530)
191 Guests, 1 Members online